Saciid Saalax Axmed Books | Signed, New & Used - Alibris
Saciid Saalax Axmed waxa uusannadkii 1945 oo ku aaddan dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka ku dhashay guri miyi, halka lagu magacaabo Samawacad oo ku taal casha dhexe ee buuraha magaalada Laas Qoray korkeeda dhaca, Gobolka Sanaag. Waxa uu ka dhashay qoys Soomaaliyeed oo reer magaal-xeebeed ah asalka Maahkir, isla markaana reer miyi xoolo raacato ku lug leh ahaa. Xagga waxbarashada, dugsiga hoose waxa uu ka dhigtay isla Laas Qoray iyo Ceerigaabo, kan dhexena dugsigii caanka ahaa ee Dayaxa....See more
Saciid Saalax Axmed waxa uusannadkii 1945 oo ku aaddan dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka ku dhashay guri miyi, halka lagu magacaabo Samawacad oo ku taal casha dhexe ee buuraha magaalada Laas Qoray korkeeda dhaca, Gobolka Sanaag. Waxa uu ka dhashay qoys Soomaaliyeed oo reer magaal-xeebeed ah asalka Maahkir, isla markaana reer miyi xoolo raacato ku lug leh ahaa. Xagga waxbarashada, dugsiga hoose waxa uu ka dhigtay isla Laas Qoray iyo Ceerigaabo, kan dhexena dugsigii caanka ahaa ee Dayaxa. Dugsiga tababarka macallimiinta waxa uu ku qaatay dugsigii sare ee Cammuud. Jaamacadda Ummadda waxa uu ka baxay Kulliyaddii Waxbarashada ee Lafoole (Biology/chemistry). Waxa uu ka mid ahaa hormadii ugu horreysey ee sanadii 1968 kulliyaddaa lagu furay. Saciid Saalax waxa uu Wasaaraddii Waxbarashada iyo Barbaarinta ka soo maray bare dugsi dhexe, bare dugsi sare iyo bare jaamacadeed oo uu isla Lafoole muddo gaaban wax ka dhigay. Waxa uu soo qabtay xilal maammule dugsiyo sare, machad macallineed ilaa iyo Agaasimaha Waaxda Barbaarinta oo isagu soo unkay. Saciid Saalax waabare shaqadiisa dhab ahaaneed ee uu ku faano, taa oo uu ku la baxay "Macallin Saciid." Labaatankii sannadood ee u dambeeyey, ilaa hadda, waxa uu macallin ka ahaa Dalka Maraykanka, Gobolka Minnesota. Sannadkii 2012 ayaa ay u buuxsantay 50-guuradii shaqadiisa macallinnimo. Xagga hal'abuurka, Saciid Saalax fanka iyo suugaanta waxa uu ku bilaabay qoyskooda dhexdiisa, dabadeedna dugsiyadii waxbarashadiisa oo dhan waa uu la socday. Waxa se uu si fiican ugu xididdaystay markii uu Lafoole oo ahayd goob aqoon iyo fan badan kulmisay galay. Waxyaalaha ugu waawayn ee lagu yaqaan dhankaa waxaa ka mid ah Kooxdii Iftiin ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta oo uu aasaaskeedii, tababarradeedii iyo hal'abuurkeedii ka soo hawl galay, taa oo ka mid ahayd qaybaha Waaxda Barbaarinta ee uu agaasimaha ka ahaa ilaa la soo gaaray bilawgii Dagaaldii Sokeeye. Saciid Saalax waxa uu hadda deggenyahay dalka Maraykanka, halkaa oo uu bare sare (af Soomaali) ka yahay Jaamacada Minnesota (Magaalooyinka Mataanaha ah). See less
Saciid Saalax Axmed book subjects
Saciid Saalax Axmed's Featured Books
Masraxiyaddii Aqoon Iyo...